Cartoni ၏ကောင်းတစ်ဦးအစုအပေါ်ဖရန့်ဝီလိုဇာနိုရဲ့မစ်ရှင်ကြွင်းသောအရာကပ်လျက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Cartoni တုတ်၏အကောင်းတစ်ဦးအစုအပေါ်ဖရန့်ဝီလိုဇာနိုရဲ့မစ်ရှင်ကြွင်းသောအရာ
"ငါသည်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဟေတီအတွက် AIDS ဆေးခန်းမိဘမဲ့ဂေဟာရိုက်ကူးတော့, ငါသည် Burkina Faso, အာဖရိက၌ရေရေတွင်းများတူးဖော်မှတ်တမ်းတင်နှင့်ချွေးတပ်စခန်းအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်ခုလက်ထပ်မီးလောင်တိုက်သွင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ၏ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းကိုပွောပွီ," ဝီလိုဇာနိုကပြောပါတယ်။ သူဖန်တီးအဆိုပါပုံရိပ်ဖှယျဖြစ်ပါတယ်။ Visual ဇာတ်လမ်းပြောပြတိကျစွာစင်ကြယ်သောလက်လှမ်းသောက်သုံးရေ၏ပထမဦးဆုံးတစ်စက်တစ်ဦးဟုလူသိများဖူးဘူးသူတစ်ဦးသည်လူများတို့အားဆိုလိုနိုင်သလဲဆိုတာကိုသိရှိစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဖရန့်ရဲ့ကော်ပိုရိတ် client များကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတဲ့အပန်းဖြေစခန်းတို့ပါဝင်သည်နှင့်သူ၏ဓာတ်ပုံများကိုပြခန်းငရှိခဲ့တယ်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ နှင့်ဝါရင့်ဓာတ်ပုံဆရာသူခရီးထွက်ခဲ့ပါသည်အရပ်ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ professional နောက်ခံရှိပါတယ်။ ထဲက အခြေခံ. Los Angeles မြို့, သူ့စီမံကိန်းများကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်သူ့ကိုယူကြပြီ။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများအများစုဘတ်ဂျက်မရှိဘူးကတည်းက "ငါပိုင်ဆိုင်သောဂီယာကိုသုံးပါနှင့်တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်တဲ့ခြေရာရှိသည်။ ငါလက်ရှိတွင်နှင့်အတူရိုက်ကူးနေပါတယ် Sony က ငါ၏အဟောင်းများကို A7III နှင့်သယ်ဆောင် ကို Canon backup တစ်ခုအဖြစ် 5DMKIII, "ဖရန့်ကပြောပါတယ်။ တုတ်အဘို့, ဖရန့်ဟာကိုအသုံးပြုသည် Cartoni အာရုံစိုက် 8, သူ့အချိန်အတိအကျ-ချုံးပာဖန်တီးချောမွေ့နှင့်သဘာကြောင်းကင်မရာလှုပ်ရှားမှုကိုပေးဖို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ tripod ။
ဖရန့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို arc သူအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်များစွာစီမံကိန်းများကဲ့သို့ unscripted ဖြစ်ပါတယ်။ On-ဝေဟင် "ကျွန်မဖြစ်ဖို့အသုံးပြု" "106-1989 ကနေ 'အချောင်အပေါ်ဝီလိုဇာနို' 'အဖြစ်ပါဝါ 2001 FM ရေမှာ," ဖရန့်ကပြောပါတယ်။ ငါ disc ကိုဂျော်ကီခဲ့သော်လည်း "ငါကအမြဲအကြှနျုပျ၏ကင်မရာခဲ့ရပြီးစတူဒီယိုသို့ကြွတော်မူသောအနုပညာရှင်များ pics ကို ယူ. , ငါအချို့ကောင်းသောသူမြားရှိသည် - Eminem, ရိုင်ယာ, Lionel Ritchie, Carrie Underwood - ဤဓာတ်ပုံများအများအပြားခဲ့ဖူးဘူး လူသိရှင်ကြား shared ။ "
သို့သော်ဖရန့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုခစျြနှင့်ရွေ့လျားနေသည့်ပုံရိပ်ကိုသူတစ်ဦးမိုက်ကရိုဖုန်းတက်ခူးတာရှည်မတိုင်မီစတင်ခဲ့သည်။ "ငါသည်သင်တို့အားငါအလယ်တန်းကျောင်းအတွက်ခဲ့ကတည်းကငါရိုက်ကူးခဲ့ကြခြင်းနှင့်ငါကျေးဇူးတင်သို့မဟုတ်ဘို့အပြစ်တင်ဖို့ငါ့အမေများပြောချင်မှန်း," ဖရန့်ကပြောပါတယ်။ "သူမဟာအမြဲတမ်းရှိခဲ့ 35mm ရုပ်ရှင်ကင်မရာနှင့်စူပါ 8 ရုပ်ရှင်ကင်မရာကအိမျတျောကိုလှည့်ပတ်ခြင်းနှင့်ငါဓါးနှင့်တိပ်ခွေတွေနဲ့ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်သောသူတို့အား tools များနှင့်အတူပုံပြင်များပြောပြစတင်ခဲ့ပါတယ်။ "မကြာသေးမီကအထက်တန်းကျောင်းအတန်းဖော်သည်မိမိနှင့်အတူပြန်သောနေ့၌ဖရန့်၏ဓာတ်ပုံ posted 35mm လက်ဝယ်ရရှိခြင်း။
ထိုသို့ဖရန့်နှင့်အတူသမိုင်းရှိပါတယ်ထွက်လှည့် Cartoni။ ငါဒေသန္တရအသင်းတော်အဘို့အမီဒီယာဒါရိုက်တာအဖြစ်ငါ့အချိန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်သောအခါ "ဆယျ့ငါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသူတို့နှစ်ခုရှိခဲ့ Cartoni tripod ငါအခါတိုင်းငါတတျနိုငျသသူတို့ကိုအသုံးပြု, "ဖရန့်ကပြောပါတယ်။ "အဲဒီအချိန်တုန်းကငါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဘတ်ဂျက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ Cartoni ဒါကြောင့်ငါကတခြား tripod တစ်တစ်တန်ဝယ်ယူအများစု shooters ကဲ့သို့ငါသည်ငါ့ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာသူတို့ထဲကတစ်ဦး stack ရှိသည်။ "
နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကစုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့ဖရန့်နောက်ဆုံးတွင်တယ် Cartoni Burbank အတွက်တီးဝိုင်း Pro ကိုမှပထမဆုံးနေ့ကသုံးပြီးပြီးနောက်သူကအပေါ်ရောင်းချခဲ့သည်။ "ငါသည်ယုတ်ညံ့ tripod သုံးစွဲငွေရှိသမျှနှင့်အတူငါတော်တော်များများ Cartonis ဝယ်ယူကြပါပြီ" လို့သူကပြောပါတယ်။
ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖရန့်ရဲ့အနောက်ခံသူ့အသိုင်းအဝိုင်းဒါပေမယ့်ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူမသာအစေခံရန်အခွင့်အလမ်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောရှိပါတယ် - GlobalPointMinistries.org။ "ငါသည်မတူညီများမှာမှရေးဆွဲနေပါတယ်အဆိုပါစီမံကိန်းများ," ဖရန့်ကပြောပါတယ်။ "ငါသည်လေးကြိုးမဲ့ lavs နဲ့ငါ့အသံစက်ပစ္စည်း MixPre6 သုံးပြီးငါ့ကိုယ်ပိုင်သံကို run ခြင်းနှင့်လူအပေါင်းတို့အားပြောင်းကိုရှာနေပါတယ် Sony က အခြားဖန်ခွက်နှင့်အရ Sony က ဘတ်ဂျက်ရမ်းအဖြစ်ကင်မရာ။ "
အဆိုပါ Cartoni သူနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ "ငါသည်ရုံရှိရာသို့အလျင်အမြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့လျှင်, ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုတုတ်စျေးပေါသောကြောင့်ငါမကြိုက်ကြဘူးသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်ရိုက်ချက်များနှင့်အတူစိတ်ပျက်တန်ချိန်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်," ဖရန့်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအစိုင်အခဲမှန်မှန်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်း, tripod နှင့်အတူရိုက်ကူးဖို့ဒါကောင်းတဲ့ဖြစ်၏။ "
"ကျွန်မနောက်ကျောပေးခြင်းကိုချစ်," ဖရန့်ကပြောပါတယ်နှင့်သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်မယူအလုပ်သူ၏အံ့သြဖွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပါလျှင်, သင်လျင်မြန်စွာတဲ့clichéမဟုတ်ပါဘူးမြင်လိမ့်မည်။ မိမိအက်ဘ်ဆိုက်ထုတ် Check, lozanoproductions.com နှင့် @franklozano မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ။ ဖရန့်ရယ်စရာ "ငါသည်ဤမျှလောက်များစွာသော Non-အမြတ်အစွန်းထွက်ကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ, ငါအမှုနဲ့သည်မဟုတ်သူတစ်ဦးတည်းသာတယ်။ " ဟုဆိုဖရန့်ရယ်နှင့်ဆက်လက်ဟု "ဒါပေမယ့်ပြောပြရန်အချို့တော်တော်လေးအေးနေရာများမှအကြှနျုပျကိုယူထားပါတယ်ကြောင်းကိုစိတ်သဘောချင်းတူရဲ့ ကိုပြောသည်ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းပုံပြင်များ။ ဆိုလိုသည်မှာ "ငါ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
Manios ဒစ်ဂျစ်တယ် Cartoni ကင်မရာထောက်ခံမှုများအတွက်သီးသန့်အမေရိကန်ဖြန့်ချိသည်။
Cartoni ကို 'တစ်ဦး SDS tripod အနိုင်ရမည်ဟု' 'ပြိုင်ပွဲမှဆုရရှိသူကိုကြေညာ - သြဂုတ်လ 16, 2019
Kinotehnik ရဲ့ Practilite Kit အခါလမ်းမပေါ်တွင် Firstline ကို Creative တောက်ပထွန်းလင်းကူညီပေးသည် - သြဂုတ်လ 6, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ကင်မရာကိုအထောက်အကူ Cartoni cartoni tripod တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC IBC 2019 IBC ပြရန် manios ဒစ်ဂျစ်တယ် Manios ဒစ်ဂျစ်တယ် & ရုပ်ရှင်ပွဲတော် လက်စွဲ tripod ထုတ်ကုန်သစ်များ SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို tripod	2019-09-03
ယခင်: နွေရာသီ 2020 ဘွဲ့လွန်သုတေသန International
နောက်တစ်ခု: Videosys အသံလွှင့် IBC4 မှာ Epsilon 2019K ဒီကုဒ်ဒါနှင့် Receiver ဖော်ပြ